လယ်တောသူအလှမယ် (Miss Farmer Contest) ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » လယ်တောသူအလှမယ် (Miss Farmer Contest) ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်
လယ်တောသူအလှမယ် (Miss Farmer Contest) ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်
Posted by manawphyulay on Jul 5, 2012 in Events/Fundraise | 20 comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းအသင်း၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသား စုံညီ အစည်းအဝေး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လယ်တောသူအလှမယ် (Miss Farmer Contest) ပြိုင်ပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
နေ့ရက် – ၁၅၊ ၇၊ ၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် – မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ
နေရာ – မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (MCC) ခန်းမ
မင်းဓမ္မလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ပဏာမမယ်ရွေးပွဲကို ဇူလိုင် ၆ ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ ပန်ဒါဟိုတယ်တွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆု ကျပ် (၁၀) သိန်း၊ ဒုတိယဆု ကျပ် (၈) သိန်း၊ တတိယဆု ကျပ်(၆) သိန်းနှင့်အတူ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်များအား နှစ်သိမ့်ဆုများနှင့်အတူ အခြားဆုများကိုလည်း ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်သည်။
ဖုန်း – ၂၁၈၂၆၆၊ ၂၁၈၂၆၇၊ ၂၁၈၂၆၈၊ ၂၃၀၁၁၂၈၊ ၂၃၀၁၁၂၉
စဉ်းစားရခက်သား..လယ်တောသူအတော်များများက လယ်ကွင်းထဲဆင်း နေပူမိုးရွာလေတိုက်ခံပြီး ဆင်းနေရတာဆိုတော့..
အဲဒါတော့ ကိုယ်တိုင် ဝင်ပြိုင်ကြည့်မှ သိပေမပေါ့လေ..
စီနီယာ နံပတ်တစ် ဒေါ်စိန်ဗိုက်
စိတ်ကြီး ခနောင်တို ကျေးရွာ
တီဗိုက်..သွားမပြိုင်နဲ့လေ။ လယ်တောသူလေးတွေကို အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါ။
ကျုပ်က ဂယ်ထင်ပြီး ထမိန်တောင် ခါးတောင်းကျိုက်ပြီးဘီ..
နော့်တွက်တောင် ချန်ဘူး။ ဟင့်…
အော် MG မှာလားလို့ ပြိုင်မလို့ ..
ဒါဆို ကိုMလုလင်တို့ကိုလက်တို့မှပဲ ……… သူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ …….
သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြား၊ ထမီတိုတိုကို ဝတ်၊ အနွေးထည်နဲ့ဆိုတော့
ho leo မှာ အမ တွေ ရှိတယ် ပေါ့၊
သိရတာ ရွာသားတွေ အတွက် အားတက်စရာ။
ကဲ ရွာသားတို့ ရေ၊ အမတွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းလေး ကြားတယ်နော်။ ဝါမဝင်ခင်လေး အားထုတ် လိုက် ကြ။
နောက်တာ နော် ho leo.
အစ်မ မနောရေ … လယ်တောသူဆိုပြီး … လယ်တောသူနဲ့ တူအောင်တော့ ပြိုင်ကြမယ် မထင်ဘူး … ။
တစ်ခါမှ တံမြက်စည်းတောင် မလှည်းဖူးတဲ့ လက်တွေနဲ့ .. ရေမချရသေးတဲ့ အဝတ်တွေဝတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီးဆိုး ၊ ပါးနီးဆိုး လာကြလိမ့်မယ် … ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ လူတွေနဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ … ကိုက်ညီမှုမရှိတာတော့ … ရယ်ရတယ်နော် .. ဒီလောက်ပိုက်ဆံ ဆုတွေ ပေးမယ့်အတူတူ ၊ သဘာဝကျကျ ဟန်ကျကျ အပင်ပန်းခံပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ .. လယ်ထဲက လယ်တောသူတွေကိုပဲ ပြိုင်ခိုင်းသင့်တယ် … ။
မမအိတုံ ရေ …
အဲဒီ လိုဆိုတော့ MCC မှာပြိုင်လို့မရဘူးခင်ဗျ ….
လယ်ကွင်းတွေမှာ ပြိုင်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားလို့ ….
အဟီး ကောင်းသားပဲ .. လယ်ကွင်းထဲ ဇာတ်စင်ဆောက်ပြိုင်ခိုင်းကြည့်ပါလားနော် … ။
လယ်တောသူလေးတွေ အမည်ခံပြီး မော်ဒယ်မတွေတော့ လုပ်စားဦးမှာပါပဲ … ဟူး .. စိတ်မောဒယ်
မိုက်တယ်ပြိုင်ပွဲကဆုငွေတွေတော့စိတ်ဝင်စားသား မပြိုင်ချင်ပါဘူး ဒီလောက်ချောတဲ့သူကဆုရမယ်ဆိုတာသိပြီး စနိုးသူဌေးထိုင်ငိုသွားလိမ့် မယ် သူအလုပ်ကထွက်မှာဆိုးလို့လေ စနိုးဆုရသွားရင်အလိိုလို producer တွေလိုက်လာမယ် သရုပ်ဆောင်လုပ်ခိုင်းနေရင် စနိုးခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကနေထွက်ရမှာပေါ့ မထွက် ချင်သေးဘူး လစာတိုးခံနီးနေပြီ ဒါကြောင့်ဝင်မပြိုင်တော့ဘူးနော်…….
ဘယ်သူလိုက်မလဲ သံတွဲသားတို ့။
ဝင် ပြိုင် ချင်လိုက်တာ…
မော်ဒယ်တွေ ဝင်ပြိုင်ရင်တော့ သူတို့ပဲဆုရမှာ
P chogyi ရေ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့ခွေတွေကတော့
တကယ့်လယ်တောသူ အစစ်တွေပဲ ပြိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့
တောသူတောင်သားဘဝ တကယ့်အနှစ်သာရကို ပြိုင်မှ ဆုပေးသင့်တယ်။ ဆုရရှိတဲ့သူကလည်း ဒီလိုမှသာ ထိုက်တန်စွာ ရရှိမယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ခုက ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြိုင်မလဲဆိုတာ အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းတယ်နော်။